Codsigii Ciidan ee Madaxweyne Farmaajo sidee uga jawaabeen dalalka Jaarka ah? – Xeernews24
Codsigii Ciidan ee Madaxweyne Farmaajo sidee uga jawaabeen dalalka Jaarka ah?
Dowladda Jabuuti ayaa sheegtay in ay kordhineyso Ciidamada ka jooga Soomaaliya ee qeybta ka ah howlgalka Midowga Afrika ee ka socda Soomaaliya.
Taliyaha guud ee Milatariga Dalka Jabuuti Zakariye Sheekh Ibraahim ayaa sheegay in Ciidamo dheeraad ah ay Jabuuti u direyso Soomaaliya.
Zakariye waxaa uu sheegay in Jabuuti ay ka mid tahay Waddamada aqbalay codsiga Madaxweynaha Soomaaliya ee ahaa in Jabuuti ay Ciidamo ku taageerto dowladda Soomaaliya si ay uga qeybqaataan gulufka dagaal ee ka dhanka ah Al-shabaab,kaas oo ay dhawaan shaacisay Dowladda Soomaaliya.
Jabuuti waxaa ay ka mid tahay waddamada horayba uga tirsanaa howlgalka AMISOM,waxaana Ciidamada ugu bdaan ay ka joogaan Gobolka Hiiraan ee badhtamaha Soomaaliya.
Billowgii Bishan madaxda dowladda Soomaaliya iyo dowlad Goboleedyada ayaa isku afgartay in ay qaadaan dagaal ka dhan ah AL-shabaab,khilaafka u dhaxeeya iyagana la dhimo.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa bishii hore isna waxaa uu booqasho ku tagay dalalka deriska ah waxaana uu Ciidamo weydiistay Waddamadii uu booqday ee kala ahaa Uganda,Itoobiya iyo Jabuuti.
Haddaba sidee waddamadaas uga jawaabeen baaqa Madaxweyne Farmaajo?
Dalka Uganda oo uu safarkiisa ka billaabay ayaa shaaciyay in uu diyaar u yahay in uu Ciidamo dheeraad ah u diro Soomaaliya,Uganda waxaa ay sheegtay in Ciidamadeeda la dagaallanka Argagixisada ay u direyso Soomaaliya,waxaase ay shuruud kaga dhigtay in aysan hoostageyn AMISOM,Qaramada Midoobey iyo midowga Yurub midkoodna,waxaan ay tiradooda ku sheegtay 5,000 oo Askari oo hore leh,taas oo irada Ciidamada Uganda ee Soomaaliya haddiiba ay yimaadaan ka dhigeysa 11,000 oo Askari.
Itoobiya,waxaa soo baxday kaddib booqashadii madaxweyne Farmaajo in kumanaan ka mid ah Ciidamada Dalkaas ay ka soo gudbeen sohdinta Gobiolka Gedo uu la wadaago Itoobiya,inkasta oo madaxda AMISOM ay beeniyeen in Ciidamo Itoobiyaan ah oo hor leh ay soo galeen Soomaaliya.
Dalka Jabuuti oo ugu dambeeya ayaa isna hadda shaaciyay in Ciidamo dheeraad ah uu u soo dirayo Soomaaliya si dowladda Soomaaliya uu uga gacansiiyo dagaalka cusub ee ay ku dhawaaqday in ay ku qaadeyso Al-shabaab.
Howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM ayaa ku dhawaaqay tobaadkii hore in 1,000-ka Askari ee ugu horreysa ay ka baxayaan Soomaaliya Bisha December ee soo socota,sidoo kalena ay si tartiib tartiib ah amniga Soomaaliya ugu wareejinayaan Ciidamada Xoogga dalka Soomaaliya.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/11/sual.jpg 225 225 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-11-11 09:44:092017-11-11 09:44:09Codsigii Ciidan ee Madaxweyne Farmaajo sidee uga jawaabeen dalalka Jaarka ah?
Xog Culus oo la helay Aalada ay qaraxyada u adeegsadaan Shabaab & Meelaha... Ra’iisul Wasaare Khayre oo Shir-Guddoomiyey Shirka Amniga ee beesha caalamka...